रुपन्देही र विराटनगरमा उपचाररत थप ३ कोरोना संक्रमितको मृत्यु – उजेली न्यूज
रुपन्देही र विराटनगरमा उपचाररत थप ३ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७७, शनिबार ०९:०१
काठमाडौं । रुपन्देही र विराटनगरमा थप तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत एक महिला र एक पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका–२ की ३७ वर्षीया महिलाको आज बिहान ६ बजे र बुटवल–११ का ४० वर्षीय पुरुषको गएराति ११ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिए । बुटवलका पुरुष भदौ १५ गते र नवलपरासीकी महिला भदौ १७ गते अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
उनीहरुको भेन्टिलेटरको सहायतामा आइसियूमा उपचार भइरहेको थियो । दुवैमा ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या रहेको तर अन्य दीर्घ रोग नरहेको डा. गौतमले बताए । योसँगै रुपन्देहीकम कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुगेको डा गौतमले जानकारी दिएका छन ।
यस्तै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि उपचाररत एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोरङको विराटनगर–११ घर भएकी ४३ वर्षीया महिला छिन् । उनको शुक्रबार साँझ ६ः३० बजे मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा.निदेश सापकोटाले जानकारी दिए ।
प्रादेशिक ल्याब बिराटनगरमा परीक्षण गर्दा उनमा भदौ १७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट उनलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो । बिगत ४ वर्षदेखि उनमा उच्च रक्तचापको समस्या थियो ।
Previous: मेस्सी ‘हृदय टुटे’ पनि यसकारण बस्दैछन् बार्सिलोनामै
Next: बलिउड अभिनेत्री कंगनाको ‘ट्याटू’